Momba anay - Shenzhen Polymer Battery CO., LTD
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina dia injeniera 30 eo ho an'ny ekipa PLM R&D ao anatin'izany ny 5 PHD, 10 MFD ary ny bakalorea 15. Fizarana 30 eo ho eo ny fitaovana famokarana automatique, fitaovana 20 nubit Semi-automatique ary 8 famokarana 8 ao amin'ny orinasa.
Ao amin'ny PLM, dia nanolo-tena hanolotra vokatra avo lenta amin'ny mpanjifa izahay, sady tompon'andraikitra ihany koa ary mahafa-po ny tolotra amidy amidy, misy ny fitarainana rehetra hamaly.
ao anatin'ny 24 ora ary miatrika ny fomba fiasa etsy ambany: miverina-mihetsika, famakafakana, famintinana ary olana momba ny tatitra 8D, tohizo ny fanatsarana ny kalitao mba hihaona amin'ny saran'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Shenzhen Polymer Battery CO., LTD dia naorina tamin'ny taona 2014, dia mpamokatra batterie litera lithium ion ary manana tantara maherin'ny 5 tapitrisa ao Shina. Ny vokatra lehibe dia batterie polymer azo tsapain-tanana, kitapo 18650 bateria, bateria e-bike, fonosana bateria lithium na tetik'asa fanamboarana bateria namboarina manokana. Afaka manome vahaolana iray sy dingana iray avy amin'ny bateria mankany amin'ireo singa bateria izahay araka ny takian'ny mpanjifa.
Mpanamboatra batterie lithium-ion izahay. Raha liana amin'ny vokatra azontsika ianao dia afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka eo ambany na havanana amin'ny tranokala. Hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora!